Horudhac: Arsenal vs Crystal Palace… (Muxuu yahay Gunners iyo rikoorkeeda Premier League ee kulammada habeenka Isniinta?) – Gool FM
(London) 18 Okt 2021. Kulanka ugu dambeeya horyaalka Premier League asbuucan ayaa caawa la ciyaari doonaa marka ay Arsenal soo dhoweyso naadiga Crystal Palace.
Labada naadi ayaa isku xiga dhanka kaalmaha kala sarreynta horyaalka Ingiriiska iyadoo Gunners ay kaalinta 13-aad kula jirto 10 dhibcood kaddib toddobo kulan, waxayna saddex dhibcood ka sarreysaa kooxda ay caawa la ciyaareyso oo leh toddobo dhibcood.
Arsenal ayaa qiimeyn ku sameyn doonta saacado kahor kulankan xiddigaha kasoo laabtay gudashada waajibaadka qarammadooda iyadoo shaki la gelinayo Gabriel Martinelli inuu safan karo ciyaartan isagoo dhaawac ka qaba muruqa halka Granit Xhaka oo dhaawac muddo fog ah garoommada kaga maqnaan doona.
Dhinaca kale, wax dhaawacyo cusub ah lagama soo sheegin Crystal Palace oo waxaa kaliya soo kabasho ku jira Eberechi Eze iyo Nathan Ferguson.
Arsenal ayaa kaliya hal guuldarro la kulantay siddeeddii jeer ee ugu dambeysay ee ay Palace la ciyaartay horyaalka iyadoo ka heysata saddex guul iyo afar barbarro.
Balse waxay guul gaari weysey mid kasta oo ka mid ah saddexdii jeer ee ugu dambeysay oo ay marti qaadday iyadoo labo jeer barbarro la gashay halka midka kalena la garaacay.
Arsenal ayaa haatan ku socota afar kulan oo guuldarro la’aan ah horyaalka iyadoo adkaatay saddex kulan midna barbarro gashay, waxaana xusid mudan in saddex ka mid ah kulammadaas ay shabaqeeda difaacatay.
Arsenal ayaa guuleysatay toddobadii kulan ee ugu dambeysay horyaalka oo ay Isniin ciyaartay iyadoo dhalisay 15 goolka waxaana laga dhaliyay labo gool oo qura.
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa dhaliyay toddobo gool kaddib siddeed kulan oo uu ciyaaray Premier League habeen Isniin ah.
Crystal Palace ayaa la kulantay kaliya hal guuldarro lixdii kulan ee ugu dambeysay Premier League iyadoo guul gaartay hal kulan misena barbarro gashay afar jeer.
Kooxda lagu naaneyso The Eagles ayaa dhalisay kaliya hal gool qaybta hore ee ciyaarta horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, waana kooxda ugu goolasha yar qaybta hore ee ciyaarta.
Afar ka mid ah shantii gool ee ugu dambeysay Crystal Palace ka dhalisay horyaalka Ingiriiska waxaa dhaliyay xiddigo baddel kusoo galay.